Triptorelin एसीटेट इंजेक्शन / पाउडर: म यसलाई कहाँ प्राप्त गर्न सक्छु? - Phcoker
Triptorelin एसीटेट इंजेक्शन / पाउडर: म यसलाई कहाँ प्राप्त गर्न सक्छु?
1। Triptorelin Acetate
2। Triptorelin Acetate के लागि प्रयोग गरिन्छ?
3। तपाईं टिटिपोर्सेलिन एसिसेट कसरी काम गर्नुहुन्छ?
4। मैले टिप्रुटेलिन एसीटेट कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ?
5। तपाइँले प्रयोग गर्नु अघि के गर्नु पर्छ?
6। Triptorelin Acetate Dosage
7। Triptorelin एसीटेट प्रयोग गरेर साइड इफेक्ट
8। के तपाईंको लागि सही Triptorelin Acetate छ?
9। मैले टिटिपोरेलिन एसीटेट कहाँ पुग्न सक्छु?
Triptorelin एसीटेट पनि टिप्र्रुटलिन एसिटेट 140194-24-7 को रूपमा एक कार्बनिक रासायनिक अणु को माध्यमिक कार्बन एटम को माध्यमिक र तृतीय पक्ष को एक धेरै संग कार्बन एटम को लागि, सरल नियमहरुमा, यसको मतलब छ कि धेरै धातु परमाणुहरु, कार्बन को लागी कार्यात्मक समूहहरु रासायनिक संरचनामा परमाणु। मूलतः 'कार्बनिक' शब्द द्वारा, के के मतलब छ के अणु है केंद्रीय परमाणु के रूप में कार्बन परमाणु है। हरेक कार्बनिक यौगिकमा कार्बन एटमको उपस्थिति छ र यही कारण कार्बन जीवनको कुञ्जी हो।
Triptorelin एसीटेट प्रयोगशालामा रासायनिक संश्लेषणको लागि पनि एक औषधीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। औषधीको प्रयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनकी यो एकदम विशेष छ। Triptorelin Acetate हल्का अम्लीय हो र यसको हाइड्रोजन स्वीकृति दर को तुलनामा थोडा अधिक हाइड्रोजन डोनर दर छ। यसमा C66H86N18O15 को एक रासायनिक सूत्र छ र औसत एनोमिनिक एमलर द द्रोल को 1311.49 ग्राम प्रति तिल। व्यापारीहरू वा ड्रग्ल्यास्टहरूले पनि नियमहरू काल्पनिक, गोनपपिल्टी आदि जस्ता प्रयोग गर्न सक्दछन् जुन सामान्यतया टिप्रुटेलिन एसीटेट हुन्छ। The Triptorelin Acetate को प्रयोग आजको संसारमा महत्त्वपूर्ण छ, यो औषधि उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ (मानव निकायको पुरुष प्रजनन प्रणालीमा अन्त्यकोष ग्रंथिहरु लाई संदर्भित गर्दछ)। न केवल कैंसर मात्र तर हार्मोन विनियमन, उन्नत टेस्टोस्टेरोन नियन्त्रण आदि को उन्नत अवस्थाहरुमा प्रयोग गरिन्छ। टिप्रोरेलेलिन एसीटेट वा टिटिपोरेलिन इन्जेक्शनको प्रयोगलाई ज्ञात गरिन्छ, यो आजको संसारमा धेरै धेरै उपयोगी हुन सक्छ। Triptorelin Acetate निर्माताले पनि सुझाव दिन्छ कि औषधि लिन अघि आफ्नो चिकित्सकको राय लिनु पर्छ।
2. Triptorelin Acetate के लागि प्रयोग गरिन्छ?
Triptorelin Acetate140194-24-7 सबै भन्दा सामान्यतया Trelstar को Triptorelin इंजेक्शन को रूप मा जानिन्छ। टिप्र्रुटलिन इंजेक्शन उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारमा धेरै सहयोगी हुन्छ। बच्चाहरु को हार्मोन को विनियमित गर्न Triptorelin इंजेक्शन पनि प्रयोग गरिन्छ; एक प्रयोग को मामला यो छ कि जब बच्चा उनको विकास मा धेरै सक्रिय छ र उनको हार्मोन धेरै जल्द नै शुरुवात puberty मंच को लागि अग्रणी को रूप मा जारी छ, Triptorelin इंजेक्शन को हार्मोन स्राव को कम गर्न को लागि प्रयोग गरिन्छ। यो औषध वर्गीकरणको अधीनमा हुन्छ Gonadotropin जारी हार्मोन GnRH को रूपमा संक्षिप्त। सामान्यतया सामान्यतया यौन वृद्धिको तुलनामा बच्चाहरूलाई नियन्त्रण गर्न यो धेरै उपयोगी छ। सरल नियमहरूमा, टेिपेरोरेलिन इन्जेक्शन प्रयोग परीक्षण पुनर्स्थापनाको अत्यधिक सरोकार घटाउन प्रयोग गरिन्छ। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन हो जुन पुरुष यौन पात्रहरूको लागि उत्तरदायी छ। त्यहाँ धेरै अन्य प्रयोगहरू छन् जुन तपाईंको डाक्टरले तपाईंको प्रतिरक्षामा आधारित सुझाव दिन्छ। एक खुराक को हेरचाह गर्नु पर्छ किनभने औषधी हरेक मानवमा समान कार्यवाही नहुन सक्छ, साइड इफेक्ट विशेष गरी मनपर्दो रुपमा हेर्नु पर्छ जब तपाई नयाँ औषधि प्रयोग गर्न शुरु गर्नुहुन्छ।
महिलाहरु मा स्तन क्यान्सर को उपचार गर्न टिप्रोरेलिन एसिनेट पनि प्रयोग गरिन्छ। एक चीजलाई ध्यान दिइनेछ कि टिप्रुटेलिन एसीटेट इन्जेक्शनले आफैंले क्यान्सर कोशिकाहरू सबैलाई हटाउनेछैन, यसले हार्मोनको वृद्धि घटाउँदछ जुन क्यान्सर कोशिकाहरु मानव शरीर भित्र फैलिएको छ, यो एक उपचार मात्र हो जुन कहिलेकाहीँ धेरै ढिलो परिणाम छ। औषधि प्रयोग गरेर तपाईंको शरीरको नियमित रूपमा नियमित जाँचहरू नबिर्सनुहोस् र कुनै पनि प्रकारको अनावश्यकतालाई तपाईंको चिकित्सकलाई रिपोर्ट गर्नु अघि यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू देखाउन सुरु गर्दछन् र सुरु हुन्छ।
इंजेक्शन आफ्नो धमनीलाई धमनीको माध्यमबाट सुरु गरेर सुरु गर्छ र यसलाई वृद्धि-उत्तेजना हार्मोन जस्तै टेस्टोस्टेरोन आदि भनिन्छ। हार्मोनमा हार्मोन र हर्मोन रिलीज गर्ने अंगहरूमा यसको सूक्ष्मजीविक क्रिया धेरै खतरनाक हुन सक्छ तर यो अझै पनि लागूपदार्थ र प्रतिरक्षाको खुट्टामा निर्भर गर्दछ। मानवको। सामान्यतया, एक खुट्टाले परिणाम देखाउँदैन तर तपाईंको डाक्टर द्वारा निर्धारित गरिएको एक विशेष खुट्टा विकास नियममा मद्दत गर्नेछ।
3. कसरी गर्छ Triptorelin Acetate wओर्कमा तपाईं
यो Triptorelin इंजेक्शन (Trelstar), endocrine ग्रंथिहरु मा दबाइ को कार्य गर्दछ र क्यान्सर कोशिकाहरु लाई हटान गर्दछ। जब यो उन्नत प्रोस्टेट क्यान्सर हुन्छ, यसको मतलब यो हो कि क्यान्सर प्रोस्टेट ग्रंथिहरु बाट अन्य अंगहरुमा फैलिएको छ। प्रोस्टेट क्यान्सरको कोशिकाहरू तपाईंको लिम्फेटिस्ट प्रणालीले तपाईंको रिटम, हड्डी र मूत्राशयलाई पनि केहि अवस्थामा राख्दछ। Triptorelin Acetate यहाँ स्थायी रूपमा सबै क्यान्सर कोशिकाहरू हटाउन मद्दत गर्दछ, Triptorelin Acetate क्यान्सरमा मद्दत गर्दछ तर तपाईले यसको भूख र प्रतिरक्षामा निर्भरता कस्तो छ।
यदि तपाईंको डाक्टरले तपाईंको हार्मोनको कमी घटाउछ भने, त्यसपछि त्यो टिप्टोरेलिन एसीटेट कार्य हुनुपर्छ।
यदि तपाईंको डाक्टरले देख्न थाल्छ भने तपाइँको क्यामेराको कक्षहरू फैलियो, त्यसपछि ती टिप्टोरेलिन एसीटेट कार्य हुनुपर्छ
यदि तपाइँ आफ्नो भौतिक उपस्थितिमा परिवर्तन देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसपछि कि टिप्रोरेलेलिन एसीटेट कार्य हुनुपर्छ
सरल शब्दहरूमा टिप्रोरेलिन एसिटेट एक प्रकारको औषधि हो जुन बजारमा उपलब्ध अन्य औषधि उपलब्ध छ, यसले तपाईंको शरीरमा प्रभावित क्षेत्रहरूसँग काम गरेर उपचार गर्न उत्प्रेरित गर्छ। तपाईं फेरि एकपटक खुसी र प्रत्येक लगातार दबाइको बीचको अवधिबाट धेरै सजग हुनुपर्छ।
त्यहाँ इन्टरनेटमा टिप्रोरेलेलिन एसिटेट समीक्षाको धेरै पनि छन् जुन गहिराईमा व्याख्या गर्न सक्छ। Triptorelin Acetate निर्माताले उत्पादको सहायता पृष्ठमा छोटो काम गर्दछ।
4. मैले टिप्रुटेलिन एसीटेट कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ?
Triptorelin Acetate (140194-24-7) क्यान्सर (प्रोस्टेट क्यान्सर) र हार्मोनको विकास विनियमनमा प्रयोग गरिन्छ। Triptorelin एसीटेट औषधि तपाईंको डाक्टरले इंजेक्शनको रूपको रुपमा दिइन्छ, सामान्यतया, इंजेक्शन प्रत्येक 4-हप्तामा एकपटक (यो तपाईंको स्वास्थ्य परिस्थिति र प्रतिरक्षामा भिन्न हुन सक्छ)। तपाईंले अनावश्यक पक्ष प्रभावहरूबाट जोगिनको लागि खुट्टामा सावधान रहनु पर्छ। तपाईंको फाइदामा, म तपाईंलाई क्यालेन्डरमा तपाइँको मिति चिन्ह लगाउन सल्लाह दिन्छु र समय समयमा सर्वश्रेष्ठ परिणामको लागि खुसीको मात्रामा Triptorelin Acetate इंजेक्शन ले। यो औषधि प्रयोग गर्दा उरीन ब्लकजमेन्ट सामान्य आम लक्षण हो। यस अवस्थामा, तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई परामर्श गर्नु पर्छ र तपाईले यो समन्वयमा एकसाथ काम गर्नुपर्छ। वैसे पनि, यो केवल पहिलो हप्ताको लागि हुनेछ। प्रायः नग्नता, यो दुर्व्यवहार को प्रयोग मा हड्डी दुखाइ केहि अन्य लक्षण हुन सक्छ तर तपाईंलाई आफ्नो डाक्टर को बताइए यदि उनि दुखाइ मा बढन जारी रहयो। यद्यपि त्यहाँ कुनै पनि खतरनाक साइड इफेक्ट छैन, सुरक्षित औषधिमा नयाँ औषधि प्रयोग गर्दा केही गलत छैन। धेरै डर नपुगे पनि, दवाईले तपाईंलाई राम्रो काम गर्दछ र तपाईंको डाक्टरको निरन्तर सहयोग छ। औषधि अवधिको समयमा कुनै पनि समय, औषधिको कुनै पनि विषयको सन्दर्भमा तपाईंको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न नि: शुल्क लाग्छ। प्रयोग तपाईंको विशेषज्ञ द्वारा परिभाषित गरिनेछ र म तपाईंलाई दयालु औषधि या खुराक संग कुनै पनि छेउमा नपढाउने सल्लाह दिन्छु।
5. तपाइँले प्रयोग गर्नु अघि के गर्नु पर्छ?
प्रायः Triptorelin Acetate प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू द्वारा प्रोस्टेट क्यान्सर वा प्रारम्भिक वृद्धिका समस्याहरूबाट पीडित हुन्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि यो औषधि तिर पक्कै रोगको उपचार हुन सक्छ। उनीहरूलाई आवधिक रूपमा साइड इफेक्ट वा लक्षणको बारेमा आफ्नो व्यक्तिगत डाक्टर / विशेषज्ञलाई सल्लाह दिनुपर्दछ, कहिलेकाहीँ सबै भन्दा बेवास्ता गरिएको साइड-इफेक्ट ठूलो समस्यामा बढ्न सक्छ। यो चीजहरू कुनै पनि औषधिको रूपमा यो औषधि प्रयोग गर्नु अघि हेरचाह गर्नु पर्दछ। रोगीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ कि टिप्र्रुर्लिनलिन एसीटेट इन्जेक्शनले सबैलाई एकैचोटि पूर्णतया क्यान्सर हटाउन सक्दैन, यो केवल हार्मोनहरू रोक्छ जसले क्यान्सरको कोशिकाको विकास रोक्छ। यो औषधि तपाईंको शरीरमा क्यान्सर हटाउन सक्दैन; यो एक ढिलो र स्थिर तरिकाले यसलाई विकास गर्न अनुमति दिदैन। तपाईले खोजी गर्नु पर्छ Triptorelin Acetate समीक्षाहरू। यदि त्यहाँ एक निर्धारित गरिएको छ भने, इन्टरनेटमा कि तलिटरोरेलिन एसिनेट समीक्षाको खोजीमा केही गल्ती छैन।
Triptorelin एसीटेट खुराक मुद्दा को गंभीरता र रोगी को स्वास्थ्य मा अलग बाड हो। Triptorelin Acetate dosage ले पनि रोगीको प्रतिरक्षामा निर्भर गर्दछ।
1 मासिक डोजज
Triptorelin इंजेक्शन वा Trelstar यदि औषधिको खुट्टा सही ढंगले निर्धारित गरिन्छ भने धेरै प्रभावकारी औषधि हो।
एक महिनाको सुस्त-रिलीज दबाइको लागि, Trelstar लाई 3.75mg मा बन्द गरिएको सिफारिस गरिएको छ 2ml सँग बाँडिएको पानी को रूप मा इंजेक्शनमा। यो महिनाको लागि जारी रहनेछ। यो आन्ट्रामुसेलुलर इंजेक्शन हुनु पर्छ। 3.75mg Triptorelin एसीटेट + 2ml पानी पेप्टाइड आधारको रूपमा कार्य गर्नेछ। यो खुट्टा मांसपेशी ऊतकों को धमनियों मा रक्त को माध्यम ले कम गर्दछ र परिणाम को लागि हार्मोन दर को कम गर्दछ।
यो खुट्टा एक 21 गेज सुई वा एकल-डिल डिलिवरी प्रणालीको प्रयोग गरी गर्नु पर्छ।
3 मासिक डोजज
तीन महिनाको सुस्त-रिलीज-रिजर्व औषधिको लागि, Trelstar लाई 11.25mg मा dosed हुन सिफारिस गरिएको छ 2ml सँग बाँडिएको पानीको रूपमा इंजेक्शनमा। यो प्रत्येक तीन महिना जारी रहनेछ। यो आन्ट्रामुसेलुलर इंजेक्शन हुनु पर्छ। 11.25mg Triptorelin एसीटेट + 2ml पानी पेप्टाइड आधारको रूपमा कार्य गर्नेछ। यो खुट्टा मांसपेशी ऊतकों को धमनियों मा रक्त को माध्यम ले कम गर्दछ र परिणाम को लागि हार्मोन दर को कम गर्दछ। यो खुट्टा एक 21 गेज सुई वा एकल-डिल डिलिवरी प्रणालीको प्रयोग गरी गर्नु पर्छ।
6 मासिक डोजज
एक छ महिनामा ढिलो-मुक्त औषधिको लागि, Trelstar लाई 22.5mg मा बन्द गरिएको सिफारिस गरिएको छ 2ml सँग बाँडिएको पानी को रूप मा इंजेक्शनमा। यसले हरेक छ महिनामा जारी रहनेछ। यो आन्ट्रामुसेलुलर इंजेक्शन हुनु पर्छ। 22.5mg Triptorelin एसीटेट + 2ml पानी पेप्टाइड आधारको रूपमा कार्य गर्नेछ। यो खुट्टा मांसपेशी ऊतकों को धमनियों मा रक्त को माध्यम ले कम गर्दछ र परिणाम को लागि हार्मोन दर को कम गर्दछ। यो खुट्टा एक 21 गेज सुई वा एकल-डिल डिलिवरी प्रणालीको प्रयोग गरी गर्नु पर्छ। Triptorelin Acetate dosage यो जस्तै भिन्न हुन्छ र यसको राम्रो सल्लाह दिन्छ कि तपाईंको डाक्टरहरु लाई सल्लाह दिनुहोस्।
तपाईं कुनै पनि सहज खुराक अवधिमा टिप्टोरेलिन एसीटेट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाइँले अधिकृत डाक्टर परामर्श पछि यसलाई प्रयोग गर्नु पर्छ र मात्र तपाईले यो औषधि दिनुभएको छ।
7. Triptorelin एसीटेट प्रयोग गरेर साइड इफेक्ट
जब तपाइँ औषधि Triptorelin एसीटेट प्रयोग गर्नुहोला, विशेष गरी जब तपाइँ पहिले यो दबाइ प्रयोग गर्नुहुँदा यो अस्थायी रूपमा विशेष हार्मोन बढ्न सक्छ, यी सर्तहरू उपचार गरिरहेका सर्तहरू जस्तै छन्। तथापि, यो एक समस्या हुनुपर्दैन तर त्यहाँ अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरू जुन सजिलैसँग निलम्बित हुनुपर्छ। मूलाब अवरोध, दर्दनाक मूत्र र रक्त को पेशाब मा केहि गंभीर साइड इफेक्ट्स को रूप मा Trelstar प्रोस्टेट क्षेत्र संग सम्झौता गर्दछ। यी ओभरडोजेजको कारण पनि हुन्छ र तिनीहरू अस्थायी हुनेछ किनकि तपाईंको शरीरले यसको प्रतिरक्षा प्रणाली नयाँ पेशा औषधिमा निर्माण गर्दछ। Triptorelin Acetate निर्माता तपाईंको साइड इफेक्टसँग केहि गर्न छैन।
तथापि, यस औषधि गर्भवती महिलाहरु लाई निर्धारित नहीं गर्नु पर्छ किनकी यो बच्चा मा प्रतिकूल प्रभाव हुन सक्छ।
हार्मोन मा एक प्रमुख कमी मा Triptorelin एसीटेट परिणाम, र पनि तपाईंको कैंसर प्रसार मा कमी मा Triptorelin एसीटेट परिणाम। तपाईं यी कुनै पनि टिटिपोरालिलिन एसिटेट दुष्प्रभाव संग काम गर्न सक्नुहुन्छ।
यो राम्रो छ कि तपाइँको डाक्टर लाई तुरुन्तै संपर्क गर्नुहोस यदि तपाइँ यिनी मध्ये कुनै पनि टिटिपोरेलिन एसीटेट साइड इफेक्ट खोज्नुहोस:
निरन्तर छेउमा ठोक्कियो, सुकेको गहिरो निस्किन्छ
पेट उल्टो अनुकरण संग पेट दुखाइ
दस्त र पाचन समस्या।
इंजेक्शन क्षेत्रमा दुखाइ वा कुनै प्रकारको शारीरिक सूजन
उच्च बीपी र शर्करा स्तरको साथ हृदय दरमा वृद्धि गर्नुहोस्
सक्रिय, मांसपेशियों को ढोका र नम्रता मा सक्षम नहीं
पछाडि दुखाइ र मांसपेशिहरु मा कमजोर
शरीर थकानमा कमी
जिब्रोले स्वाद बुझ्न सकेन
सास मा फल गंध
तातो चमक र शरीरको तापमानमा वृद्धि
टाउको दुखाइ र चकलेट
यी टिप्रुटेलिन एसीटेट साइड इफेक्ट अधिकांश साइड इफेक्ट हुन् तर यो पूर्ण सूची होइन। अन्यहरू पनि अन्य कुनै अवस्थाको आधारमा हुन सक्छ। तपाईलाई अलर्ट रहन र थप सहयोगको लागि तपाईंको डाक्टरको रिपोर्ट गर्न सल्लाह दिइएको छ।
जब तपाई यो औषधि लिइरहनुभएको छ, दबाइले रक्त, मूत्र आदि जस्ता औषधीय तरल पदार्थको मात्रामा कमी आउँछ। यो ध्यान दिनुपर्दछ कि दवाईले औषधि चलाएर रोगले कम्तीमा 48 घण्टाको लागि यी कुनै पनि तरलहरू छुनु हुँदैन। रबर दस्ताने (हेरचाहकर्ताहरूको लागि) औषधि प्रयोग गर्दा आवश्यक हुन्छ।
तपाईंले आफ्नो चिकित्सकलाई तपाईले जाँदै हुनुहुन्छ हालको औषधिको बारेमा बताउनु पर्छ किनभने टिप्ट्रुलिनलिन एसिटेटले अन्य औषधिहरूसँग प्रतिक्रिया गर्न सक्छ जुन उपचारको लागि इष्टतम नहुन सक्छ।
8. के तपाईंको लागि सही Triptorelin Acetate छ?
Triptorelin Acetate तपाईंको लागि सही छ तपाईंले प्रदान गर्दछन् हार्मोनल समस्याहरू। गर्भवती महिलाहरू बाहेक समस्याको साथ सबैले टिप्रोरेलिन एसिसेट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, तपाईंले आफ्नो डाक्टरको विचारलाई औषधीलाई विचार गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको शरीरको बारेमा राम्ररी जान्न सक्छ। कुनै पनि चिकित्सकीय सम्बन्धी मुद्दालाई तपाइँको डाक्टरसँग पहिलो पटक छलफल गरिनेछ र आफैलाई नै औषधीको लागी अन्य कुनै तुलना नगर्नुहोस्, तपाईं दुवैको भिन्न प्रतिरक्षा र खाने बानीहरू हुन सक्नुहुनेछ, सबै एकै होईन। उपचारमा Triptorelin Acetate नतीजाहरू, र यदि तपाईं यो चाहनुहुन्छ भने यो तपाईंको लागि सही छ। Triptorelin एसीटेट पाउडर वा Trelstar, यो पनि एक भ्रामक हुन सक्छ। Triptorelin एसीटेट पाउडर केहि इंजेक्शन भन्दा सस्तो छ। तर इंजेक्शनले राम्रो परिणाम देखाएको छ टिप्रोरेलेलिन एसीटेट पाउडरको तुलनामा।
9. मैले टिटिपोरेलिन एसीटेट कहाँ पुग्न सक्छु?
तपाईं प्रिस्क्रिप्टमा प्रमाणित ड्रग्स भण्डारहरूमा टिप्रोरेलिन एसिनेट को खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कुनै शाखाको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ Phcoker तपाईंको Triptorelin Acetate लाई धेरै सस्ती मूल्यमा प्राप्त गर्न। Triptorelin Acetate किन्नु अघि ब्रान्ड र समयावधिको मिति सधैँ जाँच गर्नुहोस्।
2019 विकास हार्मोन हेक्सारेलिन मा नवीनतम अध्ययन